Kodzero-dzevanhu, 12 Chivabvu 2017
Chishanu 12 Chivabvu 2017
Chivabvu 12, 2017
Hutongi hwaVaMugabe Hwokonzeresa Kukundwa kwaVaMzembi?
Munyori wezvekushanya nekushanyirwa muMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Amai Sithembile Mlotshwa, vanoti Zimbabwe, iyo iri pasi pehutongi hwaVaMugabe, hayaigona kukunda musarudzo iyi sezvo iine nhoroondo yakaipa munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaChamisa naVaSipepa Nkomo Vopesana paNhoroondo yaVaTsvangirai
VaChamisa vanoti VaTsvangirai ndiye chete munhu anozivikanwa kuti akakunda VaMugabe musarudzo dzakaitwa muna 2008, kunyange hazvo vasina kuzogadzwa semutungamiri wenyika.
Code Yosangana muHarare neMugovera
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuronga hwaro huchateverwa nemapato aya mugadziriro yawo yekuparura mubatanidzwa uyu zviri pamutemo mumasvondo mashoma anotevera.
Chivabvu 11, 2017
Mtukudzi Anoti Hurumende Haina Hany'a neVaimbi
Muimbi ane mukurumbira munyika, Oliver Mtukudzi, anoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyaya dzezvekuridza magitare, mitambo pamwe nezvekuveza nekuda kwehurumende isina hany'a.
VaNkosana Moyo Vokwikwidza Musarudzo yeMutungamiri weNyika Vakazvimirira?
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisai Ruhanya, vati havawone VaMoyo vachibudirira kana vakakwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira vega.
Zanu-PF Yonetsana neNyaya yeKubvisa Dual Citizeship
Mukokeri wenhengo dzeZanu PF muparamende, VaLovemore Matuke, vanoti bato ravo riri kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisakwanise kuwana mukana wekuti zviitwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri pamutemo kana kuti dual citizenship.
Hurumende neVamiriri veVashandi Vanotadza Kuwirirana paNyaya yeDzimba
Musangano waitwa muHarare pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende pamusoro pechirongwa chehurumende chekuda kuwanira vashandi vayo dzimba, unonzi hauna chawaburitsa mushure mekusawirirana kwemapoka maviri aya pamusoro pemafambisirwo echirongwa ichi.
Chivabvu 10, 2017
Parirenyatwa Inowana Rubatsiro rweMari yeOpen Heart Surgery
Kambani yeNational Oil Infrastructure Company of Zimbabwe yapa mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru amadhora kuParirenyatwa Group of Hospitals kuti mari iyi ishandiswe mukuopareta moyo pasina muripo.
Muzvare Nyagomo Vokurudzira Vari Kunze Kunonyoresa Kuvhota
Muzvare Barbara Nyagomo vanoti bato ravo riri kushanda zvakasimba kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza dzakaita seSouth Africa, Mozambique, Botswana neZambia kuti vadzokere kumusha kunonyoresa kuti vaokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Germany Inoudza Komiti yaVaParadza Kuti Zimbabwe Ibhadhare Zvikwereti Zvayo
Sachigaro wekomiti iyi, VaKindness Paradza, vati komiti yavo yakumbirawo kuti Germany ibvise zvirango zvayakatemera VaMugabe vachiti izvi zviri kukanganisa hupfumi wenyika.
Vechidiki muNera Vanoti Pamberi neMusangano Wavo weMugovera
Mukuru wevechidiki muNERA, VaLawrence Tembedza, vanoti vachaenderera nemusangano wavo neMugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei.
Chivabvu 09, 2017
Kushandiswa kweMagetsi eZuva Kwokurudzirwa